Cishe, kukhona abantu abambalwa ababenza ayengeke akuthande izitsha ezenziwe kusukela izisu izinkukhu, abaningi abawubiza ngokuthi le nezinkaba inkukhu. Kusukela kubo, ungakwazi beveza okuningi sokudla okwehla esiphundu. Kodwa akukhona nje esiphundu, kodwa futhi ewusizo. Phela, inani main kwalo mkhiqizo okuqukethwe eliphezulu folic acid nokusansimbi. Namuhla siqale ingxoxo mayelana "nezinkaba" kancane ngakolunye uhlangothi. Ngakho, yini libhekene inkukhu gizzards? Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka wale mikhiqizo - futhi bayini?
Ukwakheka inkukhu esiswini
Ukuze uqale, kufanele kushiwo ukuthi lo mkhiqizo ukwakheka kwamakhemikhali okufana kakhulu kunazo nezinye yenkukhu offal. Kungenzeka ukwaba esincane fat, amaprotheni, amanzi kanye elincane kakhulu,% 1 kuphela carbohydrate. Kakade okukhulunywa folic acid liyisici esibalulekile ngoba ukukhula kwezitho nezicubu ukuvuselelwa.
Ingabe ngikwenza kuphela ngenxa yaleli ewusizo ngakho inkukhu gizzards? Izinzuzo kanye umonakalo kuchazwe nezinye izakhi, phakathi okuyinto ngamavithamini A no-B, kuhlanganise riboflavin, thiamine kanye niacin, kanye sodium, potassium, zinc, phosphorous, manganese, magnesium, nethusi ayibe. ingabe kanjani? Nje ambalwa mayelana kilojoule umkhiqizo 100 grams ngasinye: ventricles abilisiwe - 105 kcal, steamed - 75 kcal, ngosile - 120 kcal.
Ukusetshenziswa inkukhu isisu
Nge izici kanye nokwakheka "nezinkaba" esikufundile. Kulesi sisekelo, singazibona bese, yini ukusetshenziswa inkukhu izisu nomzimba womuntu:
Babe ngcono isimo izinwele futhi isikhumba, ukwandisa esesuthi, ukusekela omzimba futhi kwegazi. Konke lokhu kungenxa yensimbi, i-folic acid kanye amaprotheni.
Sikhuthaze izinqubo cell division, ukukhula nokuthuthuka zonke kwezitho nezicubu. Ngenxa yalesi sizathu, izisu kufanele kufakwe ekudleni abesifazane abakhulelwe kanye nezingane ezisencane. Isizathu - khona i-folic acid.
Izinzuzo inkukhu esiswini itholakala lokuthi ukuthi ngcono wamathumbu umsebenzi. plenochke Ngenxa, okuyinto babemboza kusuka ngaphakathi, kusukela muntu ovamile microflora emathunjini bese ekuthuthukiseni ukuhlanzwa yawo engokwemvelo.
Iphuzu lokugcina sishilo le plenochku, okuyizinto ophuzi. Ngakho, azisebenzi uma ukupheka izitsha, kodwa kabanzi abelaphi bendabuko. Uma boma ugaye kube yimpuphu ke bayokusiza sohudo, dysbiosis, i exacerbation of kolwelwesi, ubuhlungu kwamanyikwe nasesiswini, yamathambo, ukungondleki nomzimba buthaka.
Ingozi inkukhu gizzards futhi izindlela
Naphezu kweqiniso lokuthi 'inkaba' iyasiza, asikwazi bayakhohlwa izinyathelo zokuphepha ezithile. Lo mkhiqizo ezigugayo, esiqandisini ngaye noma kunjalo ayikwazi egcinwe izinsuku ezingaphezu kwezimbili. Ngemuva kwaleso sikhathi eziswini zabo, hhayi kuphela uzolahlekelwa izakhiwo zabo ewusizo, kodwa ngeke yingozi ngempela ukuba impilo yakho, njengoba ziye ugxile eziningi ubuthi.
Kuyinto sici yabo futhi esigqamile. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi sinake usuku ukukhiqizwa futhi ukudla okumnandi isikhathi eside akazange ayigcine. Khumbula lapho uthenga inkukhu gizzards: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka zihlale eduze. Qaphela ukuthi ziqukethe eziningi sodium: amagremu 100 - 70 mg, futhi esiphezulu izinga ovumelekile umuntu omdala kuyinto 2300 mg ngosuku. Futhi aqukethe eningi cholesterol, ngakho ukuqapha konke.
Ukuhlanza gizzards inkukhu. ulwazi olujwayelekile
Ngakho, thina sikanye nawe wanquma ukuthenga imikhiqizo ezidingekayo futhi inkukhu gizzards. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka naye wafundelwa. It uhlala ukuze ufunde futhi kahle eyodwa ngaphezulu, hhayi emnandi kunazo, esigabeni wokulungiselela - zihlanzwe. Phela, iningi ngakho, ukuba idle ngomumo kusukela "nezinkaba", bese akhononde rigidity zabo ngokweqile. Nakuba kunjalo, efana, futhi akufanele kube. Siyini isizathu? Udinga ukwazi ukuthi ukuhlanza gizzards inkukhu. We bakutshele izindlela ezimbalwa ukukwenza. Uma uthenge imikhiqizo ongahluziwe ngenxa yokuthi ishibhile ke ulungele umsebenzi ungeyena ezimnandi kakhulu. Cishe uyazi ukuthi i-ventricle - umzimba kwemisipha, okuyinto ngakolunye uhlangothi limbozwa ungqimba lwamafutha, futhi ngakolunye, kwangaphakathi, - ukuthi lokhu ifilimu, esivikela ke ekulimaleni. Yingakho yena ngakho ezinzima. Okunzima kakhulu ukuhlanza futhi unombuzo mayelana nendlela uhlanze gizzards inkukhu. Kunezindlela eziningana ukwenza lokhu.
Izindlela zokuhlanzwa inkukhu izisu
Izindlela ezintathu eziyinhloko:
Scalding 'inkaba' amanzi abilayo, ngemuva kokwenza ukusikeka eziningana phezu kwabo ngaphandle. Khona-ke izinzipho esusa isikhumba ophuzi.
indlela kuqhathaniswa lasendulo kanjani ukuhlanza gizzards inkukhu. Ukungeza 40 amagremu kasawoti litre amanzi ngalinye, abandayo ezimbili. Cwilisa nabo kule isixazululo isikhathi esiyihora nengxenye. Khona-ke ukususa ifilimu kalula. Khona-ke ofakwe isikhathi esifushane emanzini, futhi abandayo. Ngesikhathi esigabeni sokugcina wageza ngamanzi agobhozayo ukuze ususe noma ikuphi amasalela isihlabathi imfucumfucu kahle.
Ziyakwenyanyisa izisu epulakini ngaphambi ngemuva ummese noma yiphi into blunt. Ukwenza imbobo, bese ujike ummese ngobumnene abukhali anqunywe ulwelwesi. Vele kususwe kanye ungqimba amafutha. Ngokuvamile, e ziwashwa futhi amuke ngokwalo. Sithemba ukuthi nawe bona bafunda kuhle kanjani ukuhlanza gizzards inkukhu, futhi uzokwazi ukukwenza kahle kokuhlupheka.
What do inkukhu izisu ngemuva yokuhlanza
izisu Waphatha zingagcinwa isikhathi eside ngokwanele, kodwa kabusha eqandisiwe - isikhathi esingaphezulu kwezinyanga ezingi ezine. Ngaphambi ukupheka inkambo main, 'inkaba' cishe zonke izindlela okudingeka ubilise, futhi lapha isimiso: The eside ukukwenza, ngcono. Isobho, ngasendleleni, is hhayi Kunconywa ukuba uthele, futhi ingasetshenziswa nososo kanye nesobho. Inkukhu gizzards eziningi ukusetshenziswa, ezincane ezisetshenziswa ngezindlela ezihlukahlukene zokupheka. Kulawa, amasobho, amasaladi, futhi iyisitshulu, okugazingiwe, wabhaka, esetshenziswa njengoba ukugcwaliswa for ophaya tarts. Uma inkukhu esemncane ke ukupheka ngemizuzu engaba ngu-40, uma leli lelidzala - amahora amabili. Uma ufuna ukuwaletha ukulungela ngokushesha, thatha multivarku noma ingcindezi cooker, uthola ngokushesha kabili. Khumbula ukuthi lapho sikhuluma isobho nge giblets futhi noodle ke sikhuluma inkukhu gizzards.
Ukupheka isidlo "nezinkaba"
Lapho kuziwa ekukhulumeni ngalokho ukupheka inkukhu izisu, phambi kwamehlo enu ngqo avele embonweni izitsha ezahlukene kakhulu lo mkhiqizo. Ngikhumbula ebuntwaneni nokuthi umama ukupheka ngaleso sikhathi. Sonke bese uyazama kubo okokuqala. Khumbula isikhathi esingakanani bahlanza kakhulu, esusa, wahluthula amatshe. Ngokuvamile, ngemva eziswini zabo Babekulungele, banayo into efiselekayo. Ikakhulukazi uma ucabangela babengesibo ukubukeka mnandi kakhulu. Kodwa, ngemva kokuba sesihluphekile banambitha bonke okufanayo, bekhulumisana bemi uhlu ukudla ozithandayo. Indlela elula ukupheka kubo isidlo esimnandi, ebuntwaneni usikhumbuza - kuyinto wokukucima kubo. Ngenxa yalesi sidinga izithako ezilandelayo: 350 amagremu esiswini, a onion naphakathi, amafutha zemifino kanye nosawoti.
Indlela izitsha kakhulu elula "nezinkaba"
Ngakho, sanquma ukuthi ucime "nezinkaba" yethu. Sikholelwa ukuthi sebevele ehlutshiwe. Naphezu kwakho konke lokhu, bahlanza ngokucophelela futhi sancipha ngesigamu. It kungenziwa usike ngisho zikanokusho, kodwa wonke Kunconywa ukuba ashiye. Thela pan amafutha kancane zemifino babeka izisu. Vala lid imizuzu cishe imizuzu engu-20 bese ufaka u-anyanisi lisikiwe futhi ibila phezu emlilweni ophansi kuze kuphele isigamu sehora more. Kungaba kancane xaxa, kodwa emva kwemizuzu 40 asuse isampula nililethe ekuzimiseleni. Ngaphambi kokuphela eqeda usawoti kanye nihlela phezu kwezitsha futhi ukukhonza etafuleni. Ebhekene nazo umbuzo yini ukupheka inkukhu izisu, zokucisha kubo awusoze wazisola lesi sinqumo. Khonza nelayisi abilisiwe Kunconywa, tucking ibhotela yakhe. Kungenzeka futhi pasta. Bon appétit! Uma ufuna ukudla inkukhu ethosiwe gizzards, sincoma oyi-ubilise bese yokosela namazambane no-anyanisi. A isidlo esimnandi! Futhi ungesabi ukuba ulinge ekhishini.
Imikhiqizo ne amaprotheni wokuqukethwe eliphakeme: ukudla ezempilo nobuhle
Indian kanye oluhlaza ukhari - kuyini?
Izikhangibavakashi Rostov Elikhulu endaweni izinkambo self-eqondiswa izinsuku ezimbili
Ovaloli izingane Winter - isivikelo kusukela yesithwathwa ezinzima
"Izinyawo Crow sika" (ikhekhe) iresiphi kanye igxathu negxathu izithombe